Ku dallacaadda dhibaatooyinka Apple Watch iyo watchOS 8.3 | waxaan ka imid mac
Ku dallacaadaha dhibaatooyinka Apple Watch iyo watchOS 8.3
Isticmaalayaasha Apple Watch Series 7 ayaa la kulma dhibaatooyin la xiriira dallacaadda Ka dib markii la cusboonaysiiyay ka dib markii la cusboonaysiiyay nooca ugu dambeeyay ee watchOS ee la heli karo, 8.3, sida aan ka akhrin karno Reddit iyo bulshada taageerada Apple. Inta badan cabashooyinka waxay la xiriiraan dabaylaha dhinac saddexaad.
Dhibaatadan, waxay u muuqataa in ma aha mid si gaar ah u saameeya Apple Watch Series 7, laakiin, marka lagu daro, waxay sidoo kale saameyneysaa moodooyinka hore. Qaar badan oo ka mid ah cabashooyinka waxay khuseeyaan dajiyeyaasha jaban ee laga heli karo Amazon.
Xaalado badan, Apple Watch wuxuu bilaabaa dallacaadda dhowr daqiiqo ka dibna si buuxda ayuu u istaagaa. Dib u bilaabista Apple Watch waxay kaa caawin kartaa inaad bilowdo dallacaadda, laakiin uma eka inay tahay xal waara dadka badidood, maadaama dhibaatooyin dallacadu ay soo noqnoqdaan dhowr daqiiqo ka dib.
Isticmaalayaasha kale waxay sheeganayaan in dhibaatadani ay sidoo kale dhacdo, inkastoo marar badan, oo leh saxanka rasmiga ah ee Apple loading, in dallacadu ka gaabinayso sidii caadiga ahayd ama in Apple Watch ay si toos ah u damiso marka uu batarigu ka dhamaado halka, aragti ahaan, ay ku dallaceen.
Waxaa jiray cabashooyin ku saabsan dallacaadda arrimaha Apple Watch Series 7 tan iyo bilowgii November. Apple ayaa markii hore ka hadashay arin keenaysay xawaaraha kor u qaadida gaabis ee cusboonaysiinta watchOS 8.1.1.
Isticmaalayaasha qaarkood waxay sii wadeen inay arkaan arrimaha xitaa ka dib Noofambar cusboonaysiinta watchOS 8.1.1, iyo cusboonaysiinta watchOS 8.3. waxaad mooddaa inay dhib badan soo kordhisay Milkiilayaasha Apple Watch.
Ma cadda haddii tufaaxa xal leeyahay arrimaha isticmaalayaashu ay la kulmaan ka dib cusboonaysiinta watchOS 8.3, laakiin arrinta waxay u badan tahay in wax looga qabto cusboonaysiinta mustaqbalka.
Haddii ay dhibaato kaa haysato dallacaadda Apple Watch, waxa kaliya ee aad samayn karto ayaa ah is hubayso samir. Gaar ahaan, waxaan haystaa Taxanaha 6 oo ku habboon oo rasmi ah iyo charger kaas oo aan ku dallaco maalin kasta dhibaato la'aan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Ku dallacaadaha dhibaatooyinka Apple Watch iyo watchOS 8.3
Apple waxay xidhay dukaamo badan oo faafa dartiis
Saldhiga Miyiga Hub. Hadda la jaan qaada MagSafe